Ubushushu obuninzi Ifowuni yoMsebenzi: iWarzone Hack
Nge-Multi-Rage Warzone Hack, ekuphela kwento emi endleleni yakho liqhagamshelo lwakho.
I-Gamepron ihlala isamkela abathengi abatsha ngeengalo ezivulekileyo-Thenga isitshixo seMveliso yeentsuku ezi-1 namhlanje!
I-Gamepron ihlala ixabisa abagcini bamaxesha athile kunye nabazinikeleyo-Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
Sibeka amandla ngqo ezandleni zabasebenzisi bethu apha kwi-GamePron, kwaye kungenxa yokuba siyaqonda ukuba ufuna ukuphumelela ngaphezulu. Ngawo onke amanqaku amsulwa esisebenzele kuwo iWarzone Multi-Rage Hack, uya kuba ubona impumelelo enkulu.
Ifowuni yoMsebenzi: I-Warzone Multi-Rage Hack Information
Ukuthenga ukufikelela kwi-Call of Duty: I-Warzone ye-Multi-Rage Hack namhlanje! Unokukhetha ukufikelela ukufikelela ixesha elide njengoko ungathanda, khumbula nje ukuba i-Virtualization enikwe amandla yimfuneko yokusebenzisa le Warzone Hack (ayizizo zonke ii-CPU ezixhasa i-Virtualization). Ukuba ufuna ukufumana i-FPS ephezulu xa udlala, usebenzisa iWarzone Multi-Rage Hack iya kuba yeyona nto ukubheja kwakho! Ukuba unekhompyuter ebuthathaka engazukuqhuba umdlalo kakuhle, usengakwazi ukuqhekeza- yonke into oyifunayo yiGamepron!
Ungasebenzisa uninzi lweempawu onokuzifumana kwezinye iiWarzone Hacks, ezinje ngeWarzone Aimbot kunye neWallhack. Utshaba i-ESP kunye neNkcukacha zoTshaba zikhona, kunye nokuBekwa phambili kwamathambo kunye nokuKhetha uKhetho oluPhambili kwiWarzone Aimbot yethu! Ukufezekisa ubukhulu nge Gamepron.
UkuLungiswa okuphezulu kunye ne-Enemey ESP
Utshaba i-ESP (Amathambo, IBHOKISI, iiNkcazo, ii-snapline, ii-Arrows)
Ulwazi lutshaba (ezempilo, igama, umgama, isixhobo esijongwa njengezixhobo, umlingane)
Ukuphanga kunye nezinto ze-ESP ngezihluzi.
Utshaba olwenziwe ngokwezifiso kunye nokuzicacisa
Ukuguqula i-Aimbot ON / OFF
Iinjongo eziCacileyo (Flick)
Tsiba ulayishe kwakhona oopopayi
Vula Zonke izixhobo kunye neenkamela
Malunga noMnxeba woXanduva: IWarzone Multi-Rage
Nangona ungayi kuqaphela ukwehla kwi-FPS yakho, oku kusengumboniso opheleleyo weWarzone; I-Aimbot iyakunceda uphumelele imipu kwaye ungasebenzisa umgama omde ukujolisa kwiintshaba kumgama othile. Injongo yakho iya kuba mpuluswa kwaye abanye abayi kuziva ngathi kukuqhatha kwakho, abanye abadlali baya kuthatha nje ukuba unguthixo kumdlalo kwaye bawele endaweni yabo. Ungasisebenzisa isilawuli ngesi sixhobo ngokunjalo, konke okufuneka ukwenze kukufumana isixhobo sokuphinda ubambe kwaye uphinde umlawuli ngokufanelekileyo. Sinezinto zonke ezifunekayo ukuze siphumelele eWarzone!
Kutheni usebenzisa iCall of Duty: Warzone Multi-Rage ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Ngaba ungatsho ukuba abanye abanikezeli bemikhangeli bahlala bebeka umthengi kuqala? Uninzi lwexesha, siqaphela ukuba abo sikhuphisana nabo abanakho ukuhambisa uhlobo lomgangatho ofumanekayo apha kwiGamepron- yeyona nto isenza ukuba sibe ngabona bafuna ukufunyanwa emva kwewebhu kwiwebhu! Zonke iiWarzone Hacks zethu azinakulandelwa kwaye azisayi kulumkisa inkqubo elwa ukukopela ebandakanyiweyo kwiCall of Duty: Warzone, ke akuyi kuba naxhala malunga nokuvalwa usebenzisa iiWarzone Hacks zethu. Ukuhlawula ixabiso leprimiyamu kuya kuhlala kuthetha ukuba ufumana eyona nkonzo ifanelekileyo, kwaye yile nto siyibonisayo.
Unokuba ngumlawuli womdlalo wakho, kuba ukusebenzisa kwethu kwimenyu yomdlalo kuya kukunika ukufikelela kuzo zonke izicwangciso zeCall of Duty: Warzone Hack. Unako ukuqwalasela useto kwaye uzive ngento oyithandayo kakhulu, njengoko unganyanzelekanga nje ukuba unamathele “kuseto lwesitokhwe” esikunika lona! Isantya se-Aimbot kunye nokuBekwa phambili kwamathambo zizinto ezimbini ezizezona zixhaphakileyo oza kuba nakho ukuzitshintsha ujikeleze, kodwa ukhetho lubonakala ngathi alunasiphelo xa kuziwa kwimenyu yethu yomdlalo. Akukho sidingo sokuvala umdlalo kwakhona ngeWarzone Hack yethu emangalisayo!
A3. Obu buqhetseba boNgaphandle
Hayi, ayinakusetyenziswa kwiscreen esigcweleyo.
Hayi, obu buqhetseba abusebenzi nomlawuli.
Ukufumana uloyiso kuwo nawuphi na umdlalo wedabi kunzima, kwaye iWarzone yeyona nto inzima kakhulu ukuyenza. Ungafezekisa ubukhulu ngaphandle kokuchitha naliphi na ixesha, konke omele ukwenze kukufumana ukufikelela kwiWarzone Multi-Rage Cheat yethu.
Ukukopela ngokuzingca kunye nokufikelela kwi-GamePron namhlanje!
Ilindelwe Lawula kunye ne-COD Warzone ye-Multi-Rage Hack yethu?